Andaman miaraka amin'i Port Blair
Rehefa tonga ny seranam-piaramanidin'i Port Blair, ny solontenantsika dia handray sy hiditra ao amin'ny hotely. Taorian'ny fanamarinana tao amin'ny hotely sy ny fialana sasatra, dia manomboka ny fitsidihana amin'ny Museum Anthropological, izay maneho ny fitaovana, modely fonenana, zavakanto ary asa tanana avy amin'ireo foko teratany avy ao Nosy Andaman & Nicobar avy eo avy amin'ny Museum Anthropological, mankany amin'ny moron-dranomasin'i Corbyn Corbyn . Fihetseham-po amin'ny lamaody sy feo amin'ny fonjam-by: Nandritra ny hariva, nifindra tany amin'ny Fandefasana ny Fahazavana Light and Sound tao amin'ny fonjan'ny fonja izahay izay nahatonga ny zavamahadomelina ho an'ny ady an-trano.
Androany, aorian'ny sakafo maraina dia hanohy ny dia an-dalam-pifaliana isika manoloana ny nosy Ross, Bay Bay (Coral Island) ary Harbour Cruise (Nosy Viper). Ny nosin'i Ross, renivohitry Port Blair renivohitra nandritra ny fitondrana britanika, dia misy relicier ankehitriny izy io, ary efa saika potika ny rafitra. Ny tranom-bakoka kely dia mampiseho sary sy antikelon'ny britanika, mifandraika amin'ireo nosy ireo. Ny Bay Bay Avaratra (Coral Island) dia manome karazan-java-manitra, loko marevaka sy ny fiainana an-dranomasina ambanin'ny ranomasina. Azontsika atao ny mijery ireo vatohara manintona sy ny fiainana an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fitaterana anaty sambo ety ambany sy snorkeling (fakan-kevitra). HARBOR CRUISE (Nosy Viper): Nandeha an-tongotra ho any an-tsambo ny seranan-tsambo izahay, ny fomba fijerin'ny toetr'andro fito avy any an-dranomasina, ny seranan-tsambo, ny dian-drivotra, sns, ary ny fitsangatsanganana mankany amin'ny Nosy Viper.
DAY 03: PORT BLAIR - FITIAVANA TANJONA - FIVORIANA
Taorian'ny sakafo maraina dia nentinay ho amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Port Blair izay mandrakotra ny fonjan'i Cellular (National Memorial) i Chatham nahita mozika (mozika tranainy indrindra sy lehibe indrindra any Azia), Trano Ala, Samundrika (Naval Marine Museum), Science Center, Gandhi Park , Marina Park, Andaman Water Sports Complex. Fivarotana: Amin'ny hariva, mankany Sagarika izahay (Govt. Emporium of Handcraft) ary tsena ao an-toerana mba hividy.
Alefaso any Port Blair / Harbour mba handehanana miverina amin'ny fahatsiarovana mahafinaritra.